UK: Makambani emabhazi 'haadiwe' kumanikidza vabereki vane vatyairi kuti vafambe nevashandisi vewiricheya
UK: Makambani emabhazi 'haadiwe' kumanikidza vabereki vane vatyairi vanogadzirira vashandisi vemawiricheya
Makambani emabhazi haasi kunodiwa nemutemo kuve nehurongwa hwekumanikidza vabereki vane zvitoro kuti vagadzire nzira wiricheya vashandisi munzvimbo dzakatarwa dzemabhazi, Dare rekukwirira ratonga.
"Mushonga wakakodzera" we vanoshandisa wiricheya kuwana kuchinja mumamiriro ezvinhu akadaro ndeyekubvunza Paramende, vatongi vatatu vakatonga.
Vatongi vaive vakanzi vape mutongo zvichitevera kuramba kwemukadzi kutora a pushchair nemwana akarara kubva kubha pane bhazi raishandiswa vatakuri vemawiricheya.
Lady Justice Arden, vakagara naIshe Justice Lewison naIshe Justice Underhill, vakabvumirana mukubvumirana kukwikwidza neFirst Group, iyo yakanga yarairwa kubhadhara madhora zviuru zvishanu nemazana mashanu wiricheya mushandisi Doug Paulley, 36, anobva kuWetherby, West Yorkshire.
VaPaulley vakarambidzwa kuwana bhazi muna Kukadzi 2012 mushure mekunge mukadzi aive nemwana akarara akaramba kufamba.
Mutongi kuLeeds County Court akatonga First Group yaive kutyora basa rayo pasi pe Kuenzana Mutemo 2010 yekugadzirisa zvine musoro zve remara vanhu.
[btn link = "http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/road-and-rail-transport/11279325/Parents-with-buggies-not-required-to-make-way-for-mavhiripu-on-mabhazi.html "target =" _ blank "] Verenga Nyaya Yakazara Pano [/ btn]